DEG DEG: Baarlamanka Somalia oo ansixiyay Golaha Wasiirada. - Caasimada Online
Home Warar DEG DEG: Baarlamanka Somalia oo ansixiyay Golaha Wasiirada.
DEG DEG: Baarlamanka Somalia oo ansixiyay Golaha Wasiirada.
Golaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyay xukuumadda cusub ee Soomaaliya.
Aqalka baarlamaanka ayaa waxa ku sugnaa 225 mudane oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka, 219 Mudane ayaa codkooda siiyay xukuumadda cusub ee Raiisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon, 3 Mudane ayaa diiday, halka 3 ay ka aamustay.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hor yimid baarlamaanka oo la hadlay, iyadoo ay goob joog ahaayeen Raiisul Wasaaraha, Cabdi Faarax Shirdoon iyo xubnaha cusub ee golihiisa wasiiradda.
Ansixinta xukuumadda cusub ee Soomaaliya ayaa lagu waday inay dhacdo maalintii Sabtida, oo dib u dhac uu ku yimid.
Golaha wasiirada cusub ee dowladda Soomaaliya ayaa ah kuwii ugu tirada yaraa, waxaana ay ka kooban yihiin toban wasiir oo laba ka mid ah ay yihiin haween.